Sida loogu soo celiyo abka App Store | BehMaster
Sida loo soo celiyo lacag App Store kasta" />
Sida loogu soo celiyo abka App Store kasta
La'aanta noocyo tijaabo ah oo ku jirta App Store ayaa ka dhigaysa khatar in la qaato abka kasta oo ku kacaya wax ka badan dhowr doolar. $50 waa qiimo cadaalad ah app-ka heerka sare ah, laakiin aad ayay u badan tahay in la rido adoon tijaabin marka hore. Ma jiro xaddi fiidiyow ama faallooyin kuu sheegi doona haddii ay kugu habboon tahay. Nasiib wanaag, waxaa jira hab-dhaqan. Nooc ka mid ah. Waxaad codsan kartaa soo celinta abka kasta oo aad iibsato, inta badanna waad heli doontaa.
Sida loo codsado soo celinta app
Waxaad ka bilaabi kartaa codsiga lacag celinta iimaylka xaqiijinaya iibkaaga.
Habka ugu fudud ee lacag celinta Apple looga codsan karo waa in la sugo iimayl xaqiijinaya iibkaaga, kan ay ku jiraan qaansheegta lacag-bixintaada. Kadib, taabo Ka warbixi dhibaatada ku xigta abka. Tani waxay bilaabeysaa habka codsiga lacag celinta. Si aan u caddeeyo, ma codsanayo lacag celinta Warshada. Waa app fantastik ah, oo u qalma dinaar kasta.
Waxa kale oo aad ka bilaabi kartaa codsiga lacag celinta webka, adigoo booqanaya http://reportaproblem.apple.com/.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku soo gasho aqoonsigaaga Apple. Haddii aad ku soo booqatay isku xirka shabakadda, markaas waxaa laga yaabaa inaad doorato app-ka aad rabto inaad lacag soo celinta u dalbato. Bogga soo baxay waxa uu u eg yahay sidan:
Dooro sababta lacag celintaada.
Dooro sababta lacag celintaada
Dooro sababta codsigaaga lacag celinta ah, iyo - haddii loo baahdo - ku bixi faahfaahin dheeraad ah sanduuqa qoraalka ee lagu bixiyay. Markaas Guji soo gudbi.
Codsigaagu waxa uu qaadan karaa dhawr maalmood in laga shaqeeyo. Marka la dhammeeyo, waxaad email ka heli doontaa Apple oo kuu sheegaysa in lacag celintii la soo saaray, iyo in la joojiyay wax iibsigaaga.
Abka mar dambe kama soo muuqan doono liiskaaga wax iibsiga. Waxay u muuqataa, si kastaba ha ahaatee, haddii aadan tirtirin abka, waad sii wadan kartaa isticmaalkiisa. Muddo ayaa laga joogaa tan iyo markii aan soo celiyay app, markaa 100% ma hubo qodobkan u dambeeya. Runtii, had iyo jeer waan tirtiray apps-yadii aan soo celiyay ka hor samaynta codsiga lacag celinta.
Markaad soo celiso app ama laba, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto ciqaabta Apple ee ku dhiirrashada isticmaalka adeeggeeda lacag-celinta. Mar kasta oo aad wax iibsato App Store wixii hadda ka dambeeya, waxaad arki doontaa sanduuqa wada-hadalka oo dheeraad ah oo ku weydiinaya inaad xaqiijiso iibka, iyo inaad fahamto waxa iibsigu ka dhigan yahay.
Wax fikrad ah kama haysto inta ay tani soconayso. Waxaan sameeyaa soo celin aad u yar, haddana wali waxaan arkayaa wada hadalkan mar kasta oo aan iibsado app. Way kugu filan tahay inaad marka hore kaa joojiso codsiga lacag celinta. Ama waxay ahaan lahayd, haddii aad ogtahay inay dhici doonto.
Isdiiwaangelinta iyo wax iibsiga gudaha app
Aad baan u doorbidaa abka is-diiwaangelinta sababtoo ah waxay kuu oggolaanayaan inaad isku daydo ka hor intaadan iibsan. Ama taa beddelkeed, waxaan doorbidayaa abka bixiya soo dejin bilaash ah, oo leh muddo tijaabo ah, ka dibna iibsi hal mar ah oo abka ah si aan u furo abka buuxa weligiis. Diiwaangelinta sidoo kale waa ku fiican tahay abka u qalma. Run ahaantii, badi apps-ka ku jira dukaanka App-ka waa kuwo aad u jaban oo aad ka iibsan karto oo aad iska tuuri karto haddii ay shaqayn waydo.
Si kastaba ha noqotee ayaa ah hab aad uga wanaagsan codsashada lacag-celinta laga yaabo ama laga yaabo inaan la oggolaan. Iyo is-diiwaangelinta, waxaad aad ugu dhowdahay inaad is-diiwaangeliso haddii aad marka hore isku dayi karto.
15ka Astaamaha ugu Sareeya ee Instagram, ee Waxyiga
Sida loogu daro Preloader WordPress